घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू स्पेनिश फुटबल खेलाडीहरू Ferran Torres बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
हाम्रो फेरन टोरेस जीवनीले तपाईंलाई उनको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुन, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँछ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो स्पेनी फुटबलरको जीवन कहानी हो। हामी उनको बाल्यकाल देखि शुरू, जब उहाँ प्रसिद्ध भयो। तपाईको आत्मकथा भूखलाई छेड्न, उसको बाल्यावस्था वयस्क ग्यालेरीमा हेर्नुहोस् - फेरन टोरेस बायोको एक उत्तम सारांश।
फेरेन टोरेसको जीवन र उदय।
हो, सबैलाई थाहा छ कि त्यो ब्लक मा नयाँ बच्चा हो- एक व्यापक तारा को लागी आफ्नो काम दर र अप्रत्याशितता, रचनात्मकता, र गति मा घनिष्ठ नियन्त्रण को लागी कलन्ट को लागी परिचित। यद्यपि, फुटबल टोरेसको जीवनी पढ्ने विचार केवल केही हातले गरेका छन्। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
फेरन टोरेसको बाल्यकाल कहानी:
फेरन टोरेसको प्रारम्भिक ज्ञात बाल्यकालिक फोटो मध्ये एक।
सुरु गर्न, फेरन टोरेस गार्सिया स्पेनको Fois नगरपालिका मा फेब्रुअरी 29 मा 2000 को जन्म भएको थियो। स्पेनी वि win्गेर पहिलो छोरा र तीन आमा मध्ये दोस्रो बच्चा हो जुन उनको आमा र बुबामा जन्मे।
आफ्नो महान देशवासीलाई जस्तै एन्ड्रियास इनिस्टा, Xavi र सर्जियो रामोस, Ferran एक Bonafide स्पेनिश नागरिक हो। वास्तवमा, उहाँ आफ्नो ठूलो बहिनी र बाल्यकालको सबै भन्दा राम्रो मित्र "Aranxa" र सानो ज्ञात बच्चा भाई संग Fois मा आफ्नो जन्मस्थान मा हुर्केका थिए।
बाल्यकालको फोटो उसको ठूलो बहिनी एरन्ट्काको साथ फेरेन टोरेसको।
फोइसमा हुर्केका, फरान एक महत्वाकांक्षी फुटबल उत्साही थिए जसले टिभीमा फुटबल हेर्न र कौशल सेटको नक्कल गर्न खोजेका थिए जुन उसले स्टार प्लेयरहरूले प्रदर्शन गरेको देखे। कहिलेकाँही यो ठीक भयो, अन्य पटक उसले यो गलत पायो।
फेरेन टोरेसका अभिभावक पक्षमा थिए जब उनले सोकर बल गलत गोली हान्यो। तिनीहरू प्राय: जसो भाँडाहरू चोर्ने, चश्मा र मूर्तिहरू भत्काउने आवाजबाट विचलित हुन्छन्। यद्यपि कसैले पनि उहाँलाई फुटबल र उनको एक मात्र प्रिय क्लबको लागि प्रेमको जोशबाट टाढा बनाउन केही गरेन - Valencia CF.
ऊ एक फुटबल उत्साहीको रूपमा हुर्कियो। के तपाई अनुमान लगाउन सक्नु हुन्छ कि उसको क्याप्समा क्लब लोगो छ? छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
Ferran Torres परिवार पृष्ठभूमि:
सानो बच्चाको रूपमा, फेरन टोरेसका अभिभावकहरूले उसलाई भ्यालेन्सिया सीएफ होम स्टेडियममा लगेर फुटबलको लागि उनको उत्कटतालाई प्रोत्साहित गरे। Mestalla जहाँ उनले बच्चाको रूपमा धेरै खेलहरू देखे र स्पेनिश क्लबको उदय, समस्याहरू र विजयहरूको साक्षी दिए।
सत्य यो हो कि उसको बुबाहरू र आमा दुबै मध्यम-वर्गका कमाइकर्ताहरू थिए जसले आफैं र बच्चाहरूको लागि खेल टिकटको लागि तिर्न सकीन्छन्। सानो छँदा, फेरन आफ्नो आमाबुबा मध्ये एकको नजिकको विशेषता थियो - विशेष गरी उसको सुपर मैत्री बुबा।
फेरेन टोरेसका एक आमा बुबालाई भेट्नुहोला - उसको अति राम्रो बुबा (उसको बाल्यकालमा)।
त्यो खेलकुद तरीकामा, जवान फेरन भ्यालेन्सियाको प्रशंसकको रूपमा हुर्किए र लस चेसको लागि खेल खेल्ने सपना देखे र साथसाथै उनले करियरलाई अँगाल्ने थिए जुन उनलाई स्पेनको किनारबाट टाढा लैजान्थे।
अनटोल्ड फुटबल कहानी:
फरान टोरेसका अभिभावक, उनी6बर्षको उमेरमा खुशीसाथ भ्यालेन्सियाको युवा प्रणालीमा आफ्नो नामांकनको लागि देखे जहाँ प्रतिस्पर्धी फुटबलमा उनले बयस्क क्यारियर निर्माण शुरू गरे।
पढ्नुहोस् डेभीड सिल्वा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
फे्रानन यसमा हुँदा उनले आफ्नो खेल मोडल गर्न सुरु गरे जुन बेला स्थानीय र राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीहरू सहित डेभिडियान भिला जो त्यस समयमा भ्यालेन्सियाका लागि एक स्टार प्लेयर थिए।
भ्यालेन्सिया एकेडेमीमा आफैलाई विकास गर्दै तत्कालीन फुटबलको एक दुर्लभ तस्बिर।
फुटबलमा प्रारम्भिक वर्षहरू:
महत्वाकांक्षा भएको बच्चाको आशामा, फरानले भ्यालेन्सिया युवा प्रणालीको माध्यमबाट उठेको कुनै समस्या थिएन किनभने उनी अचम्मका बच्चा थिए जसले आश्चर्यजनक बच्चाहरूलाई परिभाषित गरेका थिए।
त्यस्तै, फरानले भ्यालेन्सियाको भण्डारहरूको लागि पहिलो पद कमाउने दुर्लभ अवसर पायो जब अक्टुबर २०१ 16 मा उनी १ + वर्ष मात्र थिए। केही दिनको लागि उनले टाढाको भविष्यमा हेर्ने काम गरे।
हेर्नुहोस् जो १ 16 वर्षको थियो जब उसले भ्यालेन्सियाको रिजर्भको लागि खेल सुरु गर्यो।
Ferran Torres जीवनी - प्रख्यात रोड:
फेरनको राम्रो फार्म र स्थिरताले अन्ततः उनलाई २०१–-१– अभियान अगाडि भ्यालेन्सियाको बी-साइडमा पदोन्नति देखेको थियो, यो विकास जसले उनको पहिलो टोलीको आकांक्षा पूरा हुनको लागि ल्यायो।
भ्यालेन्सियालाई फरानको चाहना थाहा थियो र अक्टुबर २०१ 2017 मा केटासँग १ जनवरी २०१ on मा क्लबको पहिलो टीममा प्रमोशन गर्नु भन्दा अघि उनीसँग एक भव्य सम्झौता विस्तार गर्न समय बर्बाद गरेन।
पदोन्नति महिनौं पछि उसको ढोकामा आउनु अघि विन्जरले एउटा राम्रो सम्झौताको विस्तार पायो।
Ferran Torres जीवनी कहानी - प्रसिद्धि गर्न को लागी:
भ्यालेन्सियाको पहिलो टीममा पदोन्नति प्राप्त गरेपछि फे्रानले कोपा डेल रे, ला लिगा र च्याम्पियन्स लिग खेलमा स्टार्ट अप कमाएर आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्न राम्रो प्रदर्शन गरे। यो यति प्रारम्भिक प्रमुख उपस्थितिहरु थियो जसले उनको ढोकामा प्रख्यातता ल्यायो।
सुरुमा, विger्गर २००० को दशकमा स्प्यानिश टिमका चैम्पियन्स लिगमा गोल गर्ने पहिलो खेलाडी बन्न पुगे जब भालेन्सियाले नोभेम्बर २०१ L मा लिलीलाई over-१ ले हरायो। यो प्रतियोगिताले उनलाई प्रतियोगिताको इतिहासमा भ्यालेन्सियाको सबैभन्दा कान्छो गोल स्कोरर पनि बनायो।
धेरै मध्ये पहिलो: फे्रानको पहिलो च्याम्पियन्स लिग गोलको सेलिब्रेशन हेर्नुहोस्।
Ferran Torres Life Life - एकल, प्रेमिका वा पत्नी?
कुनै पनि विger्गर अग्लो र सुन्दर जस्तो फेरन जस्तो आफ्नी पत्नीसँग वा नराम्रो पनि हुन सक्दछ, प्रेमिका बिना। आश्चर्यजनक कुरा के छ भने, फेरन लेख्ने समयमा एक्लो छ र कुनै छोरा वा छोरीहरू विवाहबाट बाहिर छन्।
विger्गरले बुझ्छ कि उसलाई एक प्रेमिकाको सहयोग चाहिदैन (कम्तिमा अहिलेसम्म) आफ्नो प्राथमिकताहरू सीधा बनाउनको लागि विशेष गरी उसले उच्च अवसरहरू समात्न तयार छ कि शीर्ष उडान फूटबल खेलको प्रस्ताव छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रेमिका छैन र ऊ यो प्यारो फोटोमा एक्लो देखिन्छ।
Ferran Torres परिवार जीवन:
बलमा फेरनको अद्भुत वृद्धि र कौशलताको पर्दा पछाडि सहयोगी परिवार छ। हामी तपाइँलाई फरान टोरेसका परिवारका सदस्यहरूको बारेमा आफ्ना आमा बुबाआमाबाट जानकारी गराउँदछौं।
फेरन टोरेसका बुबा र आमाको बारेमा:
फेranरनका आमा र बुबा वि the्गर जन्मिनु अघि भ्यालेन्सियाका प्रशंसक प्रशंसकहरू थिए। उनीहरूले उनलाई मस्टेलामा खेलेको खेलमा राम्रोसँग प्रदर्शन गरे जुन २०० 2008 को कोपा डेल रे फाइनल जुन भ्यालेन्सियाले जितेका थिए। दुबै बुबाआमाले फेरनको खेलहरूमा भाग लिने कर्तव्यको ब्यक्ति बनाउँदछन् र नियमित रूपमा उनलाई नम्र रहन र व्यवहार गर्ने आवश्यकतामा पाठ सिकाउँदछन्।
फेरेन टोरेसको फोटो आफ्नो पाल्तु जनावरको बाँदर र आमाको साथ फिर्ता फाल्नुहोस्।
फेरन टोरेसका भाई बहिनीहरूको बारेमा:
फरानका दुई भाइबहिनी छन् उनीहरूमा उनको जेठी बहिनी अरान्ताक्सा र एक सानो कान्छो भाई छ। अरान्ट्का तर्कसंगत रूपमा फेरनको मुटुमा सबैभन्दा नजिकको व्यक्ति र उसको बाल्यकालका कथाहरूको संरक्षक हो। उनीलाई उनको सानो भाईको बारेमा सबै कुरा थाहा छ र उनीहरू दुवैले आफ्नो खुट्टामा ए an्कर ट्याटू साझेदारी गर्दछन्। ट्याटूले दुबैलाई सम्झाउँदछ कि कुनै चीजले उनीहरूलाई नबाक्न नदिनुहोस्।
Ferran Torres आफ्नो प्यारी दिदी Aranxa संग। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
फेरन टोरेसका नातेदारहरूका बारे:
फरान टोरेसको निकट पारिवारिक जीवनबाट टाढा, उसको पारिवारिक जराको बारेमा त्यति धेरै जानेका छैनन् किनकि यो उनका बुवा र आमाबुबा हजुरआमासँग सम्बन्धित छ। त्यहाँ फेरन का काका र काकीको कुनै रेकर्ड छैन जबकि उनका भतिजा र भाईबहिनी अझै यो जीवनी लेखेको समयमा अज्ञात छन्।
यो पौडी खेल्ने स्मार्ट तरीका जस्तो देखिन्छ। के Ferran एक प्रतिभा हो?
के तपाईंलाई थाहा छ फेरन टोरेसको मनमोहक व्यक्तित्व छ जसले व्यक्तिको लक्षण झल्काउँछ जसको राशि चिन्ह टुक्रा हो? उहाँ नम्र, भावनात्मक बौद्धिक, कडा परिश्रम र भावुक हुनुहुन्छ।
पढ्नुहोस् शाऊल नेग्युज बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य
थप रूपमा, फेरनको आफ्नो निजी र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा तथ्यहरू प्रकट गर्न कुनै समस्या छैन। जब विger्गर खेलको मैदानमा हुँदैन तब ऊ विभिन्न गतिविधिहरू संलग्न भएको फेला पार्न सकिन्छ जुन उसको रूचि र रुचि हो भनेर चिनिन्छ। तीनिहरुमा यात्रा, पौडी खेल्ने र उसको परिवार र साथीहरुसंग राम्रो समय बिताउनु समावेश छ।
लक्जरी स्पीड डु boats्गा ठूलो छुट्टी खर्च गर्नेहरू द्वारा यात्रा को लागि हो। विger्गर ठूलो खर्चकर्ता हो।
लक्जरी स्पीड डु boats्गा ठूलो छुट्टी खर्च गर्नेहरू द्वारा समुद्री यात्राको लागि हो। विger्गर ठूलो खर्चकर्ता हो। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
कसरी फेरन टोरेसले आफ्नो पैसा कमाउँछ र खर्च गर्छ भन्ने सम्बन्धमा, यसको जैव लेख्ने क्रममा उसको कुल सम्पत्ति १ 1.5 लाख यूरो हो। विger्गरको धनमा स्ट्रिमहरू योगदान पुर्‍याउनुमा पहिले त-टीम फुटबल खेल्नेलाई प्राप्त गरेको तलब र ज्याला समावेश छ। थप रूपमा एडिडास जस्ता ब्रान्डको समर्थनले उसको नेट वर्थ बढाउनको लागि धेरै गर्छ।
नतिजा स्वरूप, फेरन जीवनको रमाइलोको लागि पराई होइन जुन विदेशी गाडीहरूको साथ स्पेनको सडक क्रूज गर्ने र महँगो घरहरूमा बस्नु समावेश छ। अरु के छ त? फेरन छुट्टीमा ठूलो खर्च गर्छ र पार्टीहरू वास्तविक कडा।
Ferran Torres अनटोल्ड तथ्यहरु:
फुटबल प्रशंसकहरु फो को संभावना छrget तथ्य, तर उनीहरूले बाल्यकालका कथाहरू राम्ररी याद गर्छन्। यसैकारण फेरान टोरेस बायोग्राफीको यस अन्तिम खण्डमा हामी तपाईंलाई वि the्गरको बारेमा थोरै ज्ञात वा अनकहाइ तथ्यहरू प्रदान गर्दछौं।
तथ्य # १: हामीले उसको तलब भाँच्यौं:
भ्यालेन्सीया सीएफसँग विger्गरको सम्झौतामा उसले £ ,40,000०,००० को ठूलो तलब जालमा देखेको छ प्रति हप्ता सानो संख्यामा क्रान्च गरिएको फेरन टोरेसको तलब, हामीसँग निम्न छ।
युरोमा उसको कमाई (€)
पाउन्डमा उसको कमाई (£)
डलरमा उसको कमाई ($)
के उसले प्रति वर्ष कमाउँछ € 2,368,377.2 £ 2,085,600 $ 2,559,031
के उसले प्रति महिना कमाउँछ € 197,364.8 173,800 १XNUMX०० $ 213,253
के उसले प्रति हप्ता कमाउँछ € 45,898.8 £ 40,418 $ 49,593.6
के उसले प्रति दिन कमाउँछ € 6,556.9 £ 5,774 $ 7,084.8
के उसले हरेक घण्टा कमाउँछ € 273.2 £ 240.6 $ 295.2
के उसले हरेक मिनेट कमाउँछ € 4.6 £ 4.0 $ 4.9
के उसले हरेक सेकेन्डमा कमाउँछ € 0.08 £ 0.07 $ 0.08
पढ्नुहोस् डेनियल परेजो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
तपाईंले फेरन टोरेस देख्न शुरू गर्नुभयो बायो, यो उसले कमाएको हो।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… स्पेन मा औसत मानिस जो वरिपरि कमाउँछ € 1.889 कम्तिमा एक महिना काम गर्नु आवश्यक पर्दछ २ बर्ष र १ महिना कमाउन € 45,898.8 कुन रकम फरान टोरेस एक महिनामा कमाउँछ (लेखेको समयमा)।
तथ्य # १: फेरन टोरेस धर्म भनेको के हो:
फेरन टोरेस परिवार क्याथोलिक र त्यहाँ एक अभ्यास गर्दै छन्। वास्तवमा, उनले भर्जिन मेरीलाई गम्भीरताका साथ भक्ति राख्छन् र जब उनी प्रतिस्पर्धी खेलको पिचमा प्रवेश गर्छन् क्रूसको चिन्ह बनाउन कहिल्यै हिम्मत गर्दैनन्।
उनलाई यहाँ भर्जिन मेरीको मूर्ति नजिकै फूलहरू राखिएको देख्न सकिन्छ।
तथ्य # १: Ferran Torres 'टैटू तथ्य:
हामीले अघिल्लो राज्यले गरे झैं, फेरनसँग आफ्नो जेठी बहिनीसँग एch्करको ट्याटुहरू मिल्दो छ। कलाले उनीहरूलाई तौलउन सक्ने कुनै पनि चीज नदिने कोठामा सम्झाउने काम गर्दछ। थप रूपमा, फेरनसँग आफ्नो नाडीमा अलिकता क्रस ट्याटू छ।
तथ्य # १: फेरन टोरेसको फिफा तथ्यहरू:
के तपाईंलाई थाहा छ फेरन टोरेसको लेखनको समयमा F 78 को समग्र फिफा रेटिंग छ? जे होस्, यो विन्गरले full rating को आफ्नो पूर्ण सम्भावित रेटिंग हासिल गर्नुभन्दा पहिले उसले खेल्ने उर्जालाई ध्यानमा राख्दा समयको कुरा हुनेछ।
तथ्य # १: उसको जन्मदिन र मिति - २ February फेब्रुअरी:
टोरेस फेब्रुअरीको २ th तारिखमा जन्मेका थिए। त्यस्तै, उसले केवल आफ्नो जन्मदिन ever बर्षमा एक पटक मात्र मनाउँदछ।
भाग्यवस, उनले फेब्रुअरी २०२० मा यो उत्सव मनाए। थप रूपमा, उनको जन्म वर्ष २० the the जुन रिडले स्कटको थियो "Gladiator"सिनेमा सिनेमा हिट। के तपाईंलाई थाहा छ यो वर्ष पनि जुन ओप्राह विन्फ्रे म्यागजिन सुरू गरिएको थियो? अब तपाईंलाई थाहा छ!
केहि मुख्य रिलीजहरू जुन २००० लाई सम्झनको लागि बनाउँदछ।
पुरा नाम: फेरन टोरेस गार्सिया।
जन्मे: २ February फेब्रुअरी २००० (उमेर २० अप्रिल २०२० मा)
जन्मस्थान: फोओओस, स्पेन।
अभिभावक: श्रीमती र श्रीमती गार्सिया।
Siblings: Arantxa (जेठी बहिनी) र सानो ज्ञात भाई।
धर्म: ईसाई धर्म (क्याथोलिक)।
उचाइ: १.1.84 ० मिटर (f फिट in इन्च)
वजन: 77 किलो।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो फेरन टोरेसको बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।